WARARKA BARAAWEPOST Arbaca 26 oktober 2011
Raiisal wasaarihii hore ee Somalia oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Columbus Ohio
Dadweyne fara badan iyo marti sharaf ka kooban siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed kuwooda ku nool dalka Mareykanka ayaa xaflad aad u heer sareysa oo soo dhoweyn ah ugu qabtay magaalada Columbus Ohio Raiisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Xafladdan soo dhaweynta waxa ka hadlay dad aad u fara badan badaban oo ka koobnaa odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed iyo iyo masuuliyiin kale oo Somali ah waxayna ka hadleen qaybo kala duwan iyagoo sheegay in hadafka guud ee leysugu munaasbaddaas inay tahay soo dhoweynta mudane Farmaajo iyo dhiiro galin, ku aaddan raadinta xalka Soomaaliya.
Suldaan Xaydar Suufi Munye oo ah suldaanka guud ee beelaha Baraawe iyo qaar ka mid ah nabadoonada beeshaas ayaa ka mid ahaa dadkii lagu martigaliyay isla markaana fursadda u helay inay ka qayb galaan kulankaas isla markaana ay la kulmaan Mudane Farmaajo.
Raiisal wasaarihii hore ee xukuumadda FKMG ee Somalia Mudane Farmaajo ayaa markii uu hadalka ku soo dhowaaday waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta dalka Somalia, iyo sida loogu baahan yahay in lagu baraarugo lana sameeyo iskaashi iyo wada jir sidii dalka xal loogu heli lahaa.
Farmaajo waxa uu xusay in dowalada soomaaliya ay hayso howl u baahan garab iyo in ay jiraan caqabado xooggan oo ku gudban, kuwaasna ay gacan ka gaysan karaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadaha ku nool.
Farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu sheegay in qilaafaadka gudaha ka jira ay yihiin kuwo ka dhashay is bar baryaac siyaasadeed ee dalku uu soo maray, iminkana Ururka Al-shabaab oo ka xoog badan dowlada ay dalka haysaoa wuxuuna ugu baqay jaaliyada soomaalida in ay toosaan oo ay garab sii yaan hanaanka nabad raadinta soomaaaliya.
Farmaajo waxa uu jawaab ka bixiyay hadal haynta in uu ka fariistay siyaasada somaliya, waxa uuna yiri � Maya kama fariisan waan ku jiraa waana shaqeynayaa aniga iyo raggii ila midka ahaaba waxaan wali ku howlanahay in aan wax ka doono Rajada Soomaalia� taas oo ay u sara istaageen dhamaan ka soo qaybgalayaashii xafladan, oo sacabada isla dhacayay.
Laba ka mid ah wasiiradii xukuumaddii uu madaxda ka ahaa Farmaajo oo kala ah wasiirkii waxbarasha iyo wasiirkii Dastuurka ayaa labaduba dhankooda ka warbixiyay marxaladihii ay dowladoodii soo martay iyo howsha fiican ee ay dalka iyo dadka u horseedeen.
Shahaadooyin Sharaf ka kala yimid duqa magaalada Columbus, Gudoomiyaha gobolka Ohio, Aqalka wakiilada maraykanka, iyo kan sanadka ayaa la gudoonsiiyay Farmaajo.
Booqashada uu Farmaajo ku tagay magaalada Columbus Ohio ee dalka Maraykanka ayaa ah tii ugu horaysay ee u Farmaajo ku soo booqdo Columbus Ohio tan iyo intii uu isaga tagay xaafiiska raiisul wasaaraha Somalia.
Kulankaas kadib ayaa Suldaan Xaydar Suufi iyo nabadoonada beelaha Baraawe oo wadajira ayaa waxay shir gaar ah la yeesheen Raissal wasaarihii hore ee Somalia mudane Farmaajo waxaana Suldaanku uu u sheegay raiisal wasaraha sidii dhamaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Ohio ay u soo dhoweeyeen isla markaana u garab istaageen mudane Farmaajo markii loo magacaabay xilka raiisal wasaarenimada haatana ay weli sidii oo kale ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin.
Waxaana suldaanka iyo mudane Farmaajo ku weheliyay kulankooda odayaasha kala ah:
1-Ugaas C/qaadir Amiin Lolow
2-Nabadoon Sheekh Mohamed Abu Sheekh Maana Yaasiin
3-Dr Amiin Munye Abdow
4-Nabadoon Kaale Xaaji Rufaaci
5-Nabadoon Ibraahim Jeylaani Mohamed
6-Nabadoon Cusmaan Amiin Munye
7-Nabadoon Cumure Mohamed
8-Samadoon Axmed Mohamed Saaleh
9-Samadoon C/qaadir Faqi Daahir
10-Samadoon Mohamed Cabdi Cadaawe
11-Mudane Mohamed Faqi Daahir1
12-Mudane Mohamed Suufi
13-Mudane Mohamed Saalim Axmed